Ra'sul Wasaaraha Itoobiya Oo Balanqaaday Isbadalo Cusub +[Maxaa Ka Mida]
Monday 16th April 2018 07:47:07 in Wararka by Xarunta Guud
Raisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr Abiy Ahmed ayaa balanqaaday in uu isbadal ku samayn doono sharciyada uu sheegay in ay horseedeen ku tumashada xuquuqda aadanaha dalkaasi.
Waxa uu sidoo kale balanqaaday in doorashooyiinka dalkaasi ka dhici doona 2020 ay noqon doonaan kuwa u dhaca si xaq iyo xor ah loona ogolaan doono mucaaradka in ay si xor ah ololahooda u gutaan.
Dr Abiy ayaa ka hadlayay isu soo bax lagu qabtay caasimada halkaasi oo uu ku baaqay in dulqaad la muujiyo iyada oo dowladiisa ay wado isbadalo lagu soo afjarayo dibadbaxyadii dowladda looga soo hojeeday oo dalkaasi ka socday ku dhawaad saddex sano.
Rai'sul wasaaraha ayaa booqasho ku tagay qaybo kala duwan oo dalkaasi ka tirsan oo ay ka mid tahay magaalo xudun u ahayd dibadbaxyada iyo goob ay ka qaxeen in ka badan 1 milyan oo qof ka dib isku dhacyo qoomiyado dhexmaray.
Waa mid ka mid ah booqashooyiinkiisii ugu dambeeyay ee is xig-xigay oo uu raisul wasaaraha ku marayay labadii todobaad ee ugu dambeeayy guud ahaan gobolada dalkaasi.
Kumannaan qof ayaa isugu soo baxay caasimadda Addis Ababa halkaasi oo uu Dr Abiy Ahmed uu mar kale ku baaqay in dulqaad la muujiyo isaga oo bilaabaya hirgalinta isbadalo uu sheegay in ay yihiin kuwa lagama maarmaan ah.
Isbadaladan ayuu rai'sul wasaaraha sheegay in ay yihiin kuwa lagu dhayayo dhaawacyadii dalka soo gaaray ka dib saddex sano oo ay ka socdeen dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo kuwaasi oo horseeday dhimashada boqolaal qof.
Dr Abiy Ahmed ayaa balanqaaday in isbadal lagu samayn doono sharciyadii horseeday ku tumashada xuquuqda aadnaha dalkaasi Itoobiya isaga oo xusay in uu xaqiijin doono in mucaaradka ay door ka ciyaaraan doorashooyiinka soo oscda.
Imika mucaaradka wax xubno ah kuma laha baraalamaanka dalkaasi oo ka kooban 500 oo xubnood.
Rai'sul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya ayaa billaabay dadaalo tan iyo intii xilka loo dhaariyay bishii aanu soo dhaafnay.
Waxa xabsiyada dalka Itoobiya laga siidaayay tira saxafiyiin ah, dad u xirxirnaa siyaasadda, waxaana albabaada la isugu dhuftay xabsiyo islamarkana waxaa dib loo soo celiyay qadadka internetka ee taleefoonada gacanta oo muddo bilooyiin ah laga jaray qayba ak mid ah dalkaasi .
Balse waxaa wali dalka Itoobiya ka jirta xaaladdii degdega ahayd ee lagu soo rogay taasi oo dadka dhaliilsan ay ku baaqayaan in la qaado.
[Breaking News:-] Dowladda Somalia oo magacowday dhowr safiir oo cusub Iyo Waddamada Ay Ka Shaqeynayaan
Sii Akhri Sep 03rd 2018
Madaxweynaha Masar Oo Madaxweyne Farmaajo usoo bandhigtay qorsho cusub oo ku saabsan Imaaraadka Carabta
[Halkan Ka Daawo:-] Taliyaha cusub ee Ciidamada Liyuu Booliiska ee Dawlad Deegaanka Soomaalida oo waraysi gaar ah Bixiyey
Sirdoonka Soomaaliya Oo Gacanta Ku Soo Dhigay Qof Qaraxyo Cusub Sameynayay
[DEG DEG:-] Madaxweyne ku Xigeenka Soomaalida Itoobiya Oo Sirihii Uu Waaweynaa Qarxiyey '' Waan Cabudhsanaa''
Sii Akhri Aug 14th 2018
Ra'iisal Wasaaraha Itoobiya Muxuu Ka Yidhi In Soomaalidu Ka Godo Itoobiya Inteeda Kale?
Sii Akhri Aug 13th 2018
[Daawo] Barlamaanka Oo Bangiga Dhexe Ku Eedeeyay Inuu Soo Daabacday Lacago Cusub
Dowladda Soomaaliya oo 1,000 dhalinyaro ah Oo Soomaali Ah u balan-qaaday shaqo abuur Cusub [Somaliland Ma Ku Jirtaa?]